Miino horey ugu aasneyd degmada Xeraale ee Gobolka Galgaduud oo ku qaraxday caruur da’yar |
Miino horey ugu aasneyd degmada Xeraale ee Gobolka Galgaduud oo ku qaraxday caruur da’yar
Warar dheraad oo kasoo baxaayo caruur aad u dayar oo waxyeelo kasoo gaarte qarax miino oo ku aasnaa goob aan ka fogeyn dugsi qur aan ay dhiganayeen caruurtaasi oo kuyaalo degmada Xeraale ee Gobolka Galgaduud.
Qaraxaan ayaa lasheegay in oo kadhashay khasaaro soo gaaray caruurtaasi halka kuwa kale dhaawac soo gaaray waxana sidaa xaqiijiye gudoomiyaha degmadaasi ee dowlada soomaaliya waxaana oo sheegay in ay wadaan baaritaano.
Guddoomiyaha Degmada Xeraale Bashiir Daahir Yuusuf ayaa sheegay in qaraxa noociisa uu ahaa miino waqti hore meesha ku aasneyd sidoo kalena miinooyin noocaasi ah ay meesha ka buuxaan.
Dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale hay’adaha ku shaqada leh miino baarista ayuu sheegay in looga baahan yahay inay ka shaqeeyaan ka saarida Degmada Xaraale waxyaabaha qarxa ee dhibaatada shacabka kasoo gaareyso.
Ugu danbeyntii Caruurta somaliyeed ayaa dhibaato xoogan kala kulma waxyaabaha qarxa oo looga tago goobaha dagaalada kadhacaan ayadoo aan sijin cid gooni ah oo iska xil saarte.